Nampidinina avokoa ireo mpandeha tao anatiny, ilay mpamily sy ilay mpanampy azy kosa no nentina natao fanadihadiana raha nampidirina ambalam-pamonjana ilay fiara. Mitohy ary mitombo ny tsy fanarahan-dalàna amin’ny fitondrana olona mipetraka eo afovoany amin’izao ;efa betsaka ireo taxi-be manao izany toy ireo miazo an’Itaosy. Etsy an-daniny tsy misy intsony ny fanafody famonoana mikraoba ahosotra amin’ny tanana nefa mitombo hatrany ireo olona mitondra ny tsimokaretina coronavirus eto amintsika. Ankoatra izay dia fiara sprinter 02 no tratran'ny polisin'ny boriborintany fahaenina teny Andranomena raha saika hivoaka ny faritra Analamanga ho any Antsiranana. Mpandeha miisa 23 no tao anatin’ilay fiara izay nampidinina avy hatrany raha nanaovana fanadihadiana ireo mpamily. Nampidirina am-balam-pamonjana ihany koa ilay fiara.